Madaxweynaha Koonfur galbeed muxuu kala hadlay Shacabka Waajid? – Radio Daljir
Madaxweynaha Koonfur galbeed muxuu kala hadlay Shacabka Waajid?
Juunyo 20, 2021 4:53 b 0
Madaxweynaha Dowlad Goboleedka Koonfur Galbeed Cabdicasiis Xasan Maxamed Lafta-gareen ayaa Cxalay kulan la qaatay Qeybaha kala duwan ee Bulshada Degmada Waajid ee Gobolka Bakool.
Madaxweynaha oo degmada Waajid u tegay ka qeyb galka munaasabad lagu Caleema saarayo Guddoonka & Golaha degaanka degmadaas ayaa sii wadi doonada kulamada oo ah kuwo lagu ogaanayo xaaladaha kajirra degmada Waajid.
Wasiirka Arrimaha Gudaha Maamulka Koonfur galbeed Maxamed ayaa sheegay in kulanka uu Madaxweyne laftagareen Bulshada deggmada ka xog wareystay xaaladaha kajira degmada.
Sidoo kale waxaa uu hadalkiisa uu intaasi ku daray in Qeybaha kala duwan ee Bulshada Degmada Waajid ay madaxweynaha Koonfur Galbeed u gudbiyeen baahiyaha dhinaca amniga iyo caqabadaha kale ee heysta & in Ciidamadii horay loo qarameeyay ee ku sugan degmada inay helaan xaquuqdooda.
Ugu dambeyn Wasiirka Arrimaha Gudaha Maamulka Koonfur galbeed Maxamed ayaa sheegay in n kulanka diirada lagu saaray sidii go’doonka looga qaadi lahaa degmada waajid, sigaar ah sidii loo furi lahaa wadada xiriirisa Magalada Baydhabo & degmada Waajid.
Masuuliyiin ka socota DFS oo shir uga qayb galaya Turkiga